M Holland | Punches na Ọnwụ | Pesdị Ngwá Ọrụ
Banyere m Holland
Punches na Ọnwụ
Pesdị Ngwá Ọrụ
Mmezi Ngwá Ọrụ
Nchịkwa Ngwá Ọrụ
Nkọwapụta nke Mbadamba ụrọ
Efu ndị na-agba ọsọ
Broshọ na Akwụkwọ
Ọmụmụ ikpe & edemede
M Holland na-eme ka ọnya wee nwụọ maka igwe akụkọ ọ bụla nke mbadamba ọ bụla dị n'ụwa taa, gụnyere IMA Comprima, nutraceutical, ihe ndozi na ihe eji emepụta ihe. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ngwaọrụ mbadamba ụrọ mbadamba anyị nke pụtara na ị nwere ike iwelie arụpụta n’enweghi nnukwu ịrị elu na ọnụ ahịa ma ọ bụ ala ịchọrọ.
Anyi ghoro acho maka imeputa ihe nke oma n’ime imeputa ihe emere n’oge a ma gbalịsie ike igba mbọ hụ na aka anyị na ọnwụ nwụrụ bụ ihe kacha esite n’ichepụta ihe. Nke a na-eme ka ndị ahịa anyị ghara idobe asọmpi. Enwere ike iji ọtụtụ stemaGrade steels na ọgwụgwọma na mkpuchi PharmaCote na njikọta na atụmatụ anyị niile iji mepụta ụzọ dị egwu ga-esi rụọ ma bụrụ nke ga-arụpụta ma na-adigide n'otu oge. A na-enyekwa oge dị asọmpi na sistemụ sistemụ anyị niile, site na ndị na-akpụzi ụdị ya ruo n'ọtụtụ ngọngọ n'ọnụ.
Obere Micro bu ntuzi aka dicha ma obu kariri 4mm n’obosara. Ha na-ebugharị otu uru ahụ dị ka ọtụtụ esi arụ ọrụ, gụnyere ọtụtụ usoro nhọrọ nhazi iji dabara na ọtụtụ ngwaahịa.
Productbawanye arụmọrụ n'etiti mmepụta mbadamba ọgbara ọhụrụ bụ ihe ịma aka na-aga n'ihu, anyị onwe m na I Holland na-agbasi mbọ ike mgbe niile inyere ndị mmekọ anyị aka n'ọchịchọ ha maka ike. Anyị esibela ọtụtụ ụdị mkpokoro mbadamba tebụl iche iche.
Otutu na otutu uzo nwere otutu uru ha bara. Ndị a gụnyere:
Mmụba na arụpụta - Ọnụ ọgụgụ mbadamba kwa ntụgharị turret na-amụba site na ọnụ ọgụgụ nke ndụmọdụ.
Onweghi nnukwu mmebi nke ndi akuko ohuu - onu ahia oru di elu karie ka odi elu ya.
Mbelata oge akụrụngwa a na-agba ọsọ kwa mbadamba mbadamba - achọrọ obere mmezi nke mbadamba ọ bụla.
Mbelata nke akwụkwọ akụkọ edebere oge.
Mpempe akwụkwọ mbadamba ihe dị obere chọrọ iji mejupụta nsonaazụ - Obere ala sara mbara chọrọ chọrọ na-eduga n'ahịa ndị ọzọ mepụtara n'otu mita.
Ihe ndị a niile dị na-eduga n'ịbelata ụgwọ ọrụ na-agba ọsọ osisi.
AKULKỌ MULTI MABMAB MAKA MAKA: download PDF
Inwe ajụjụ ọ bụla? Kpọtụrụ.
Ndị otu ọrụ anyị nwere obi ụtọ inyere aka.
Na mgbakwunye na ụdị mbadamba ọkọlọtọ m Holland m na-emepụtakwa onye na-eme mbadamba mbadamba ihe wee nwụọ. Enwere ike iji akara a na ndị nwụrụ anwụ mee ka njirimara nke akara pụta, dị ka ihe mgbochi adịgboroja ma ọ bụ iji mee ka ịnakwere amara. A nwekwara ike iji onye mere ihe eji emepụta ihe na -eme ka ihe dị iche iche na-adọrọ adọrọ karịa vitamin (beed bebi, robots, dinosaurs, wdg) ma ọ bụ iji mee ka ihe ụtọ dị ụtọ; ụdị mkpụrụ osisi maka swiiti gbara ụka dịka ọmụmaatụ.
Nutraceutical na homeopathic formulations nwere ike ịnwe nnukwu ọdịnaya ma yabụ na-egosipụta njiri mara nke ukwuu. I Holland tooling nwere ike inyere ndị na - emepụta ụdị ngwaahịa a imeri usoro ọjọọ ndị a site na iji akara aka ma nwụọ site na ndị isi ọkachamara, ọgwụgwọ na mkpuchi.
Ngwá Ọrụ Mgbari
Ihe ohuru sitere na teknụzụ ndị e mepụtara n’oge a, tinyere ya na mbadamba ụrọ dị elu na-eme ka mkpakọ nke ịsa mmiri na ịsa akwa n’ime ụdị mbadamba ga-adaba. N'ime usoro mbadamba mbadamba, usoro ndị a na-ewetara ha nsogbu ndị pụrụ iche dịka ịrapara na mgbagha. Ihe dị iche iche eji arụ ọrụ mbadamba ụrọ nwere ike inyere ndị nrụpụta aka imeri nsogbu ndị a site na atụmatụ, steels, ọgwụgwọ na mkpuchi.
M Holland emezila teknụzụ na nka iji mepụta mbadamba ọnụ ahịa IMA Comprima nke nwere IMA Comprima maka ọtụtụ akụkụ IMA Comprima presses, ya mere odighi mkpa ichere maka ọkọnọ OEM. Enwere ike ibunye ndị a n'ọtụtụ steels na iji mkpuchi mkpuchi na ọgwụgwọ pụrụ iche ebe achọrọ ya.
Iwu Nzuzo | Copyright I Holland Ltd 2019